दैनिक रूपमा ओखर खानुको यति धेरै फाइदा…हेर्नुहोस । सेयर गरौ ! – yuwa Awaj
काठमाडौ : यदि हामीलाई थकान वा कमजोरी जस्ता कुनै शारीरिक समस्या छ भने, हामी तुरुन्तै औषधी लिन्छौं, किनकि औषधीले नै केही समयमै प्रभाव पार्छ। तपाईं पनि यस्तै सोच्नुहुन्छ भने यो गलत हो।
किनभने केवल औषधीमा मात्र रोगलाई सकेसम्म चाँडो निको पार्ने क्षमतामा हुँदैन। यो क्षमता अन्य प्राकृतिक खाद्यहरूमा पनि हुन्छ। आज हामी तपाईंलाई यस्तै एउटा खाद्यान्न वस्तुको बारेमा बताउन गइरहेका छौं जसको सेवनले चार घण्टा भित्र तपाईं विभिन्न रोगहरूबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ।
हामी ओखरको कुरा गरिरहेछौं। ओखर खाएको चार घण्टा भित्र हामी बिभिन्न रोगहरूबाट छुटकारा पाउन सक्छौं। यसको कारण हो, ओखरमा फ्याट हुँदैन जसले शरीरलाई हानी गर्दछ।
ओखरको सेवनले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको नियन्त्रण गर्छ, जसले हृदय सम्बन्धि रोगहरूबाट टाढा राख्छ। यदि तपाईं प्रतिदिन ओखर सेवन गर्नुहुन्छ भने तपाईंलाई ह्रदय रोग लाग्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार ओखरमा एक निश्चित प्रकारको तत्व हुन्छ, जसलाई मेडिकल भाषामा ‘थर्मोजेनिक’ भनिन्छ। यस तत्वले शरीरमा उपस्थित बोसोलाई काट्छ, विशेष गरी हाम्रो हृदयको रक्तनलीमा बढ्ने फ्याटलाई हटाउँछ।
ओखर दिमाग बढाउनका लागि उपयोगी छ। ओखरको आकार पनि मानव दिमागमा मिल्दोजुल्दो हुन्छ। यसको सेवनले हाम्रो स्मरण शक्ति बढ्छ।
थकान दूर गर्न
स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार दैनिक रूपमा ओखरको सही मात्रामा सेवन गर्ने हो भने कसैले थकित महसुस गर्नु हुँदैन। यसमा नून पनि समावेश हुन्छ। त्यसैले, यदि तपाईंले दिनभर नून खानुभएको छैन भने पनि ओखरको सेवनले यो पूरा गर्दछ।
यसमा रहेको क्याल्सियमले तपाईंको हड्डीहरूलाई मजबूत बानाउँछ।
वजन कम गर्न बजारबाट मानिस विभिन्न प्रकारका औषधी र सप्लीमेन्ट्स प्रयोग गर्छन्। तर दैनिक रूपमा ओखरको सेवन गर्ने हो भने यो वजन कम गर्नको लागि पनि निकै मद्दतगार हुन्छ।
ओखरको सेवनले मस्तिष्क सम्बन्धित गतिविधि तेज बनाउँछ, स्मरण शक्तिको वृद्धि, रगत सफा, शरीरमा रगत प्रवाह सुधार गर्दछ। कम रक्तचाप, रगत जमाउने, आदिको रोगबाट राहत दिन्छ।
मासुका परिकार खाँदा ध्यान दिनैपर्ने कुरा !
चा’डबाडका अवसरमा मा’सुजन्य परिकार र मा’दक पदार्थ सेवन बढी हुने गर्दछ । विशेषतः दसैँमा मा’सुका परिकार र मा’दक पदार्थ सेवन गर्नेहरु बढी हुन्छन् । तर‚ स्वा’स्थ्यका दृष्टिकोणले कति मात्रामा मासुका परिकार र मादक पदार्थ सेवन गर्ने भन्ने वास्ता गर्दैनौँ ।
पाए र सके जति खाने चलन छ । यसरी सेवन गर्दा शरीरलाई कस्तो असर पर्छ अड्कल कमैले मात्र गर्छन् । दसैँमा मासुका परिकारसँगै मदिरा‚ चिल्लो, पीरो मसलेदार खाना खाने चलन छ । कति खानेरपिउने: नेशनल इन्ष्टिच्युट अफ अल्कोहल अब्युज एण्ड अल्कोहोलिज्मका अनुसार कुनै पनि मादक पदार्थमा सेवन गर्दा १४ ग्राम पिउनु उचित हो । त्यसलाई स्टान्डर्ड ड्रिंक्स् भनिन्छ ।
अमेरिकन हार्ट एसोसिएसन तथा अमेरिकन डाइबिटिज एशोसिएसनका अनुसार ह्विस्कि, स्पिरिट सेवन गर्ने हो भने ४५ मिलिलिटर, बियर ३४० मिलिलिटर र वाइन, साइडर १४० मिलिलिटर पिउनु उपयुक्त मानिन्छ । ४५ वर्षमाथिका स्वस्थ शरीर भएका महिलाले दैनिक एक र पुरुषहरुले दिनको दुई पटक ड्रिंक्स गर्न सकिने सल्लाह दिइएको छ ।
Prevनेता खनाल भन्नुहुन्छ : प्रचण्डसँग ओलीले पार्टीको निर्णय मान्दिन भन्नुभएछ, अब ग’म्भीर सं’कट आयो !
Nextकिसमिसले रगतको कमि पूरा गर्नुको साथै, छन यति धेरै लाभहरु…हेर्नुहोस् ।